किन रोकिएको छैन बालविवाह ? – Merokhushi
किन रोकिएको छैन बालविवाह ?
खजुरामा बालविवाह अझैं पनि एक जल्दोबल्दो समस्याको रुपमा रहेको मैले देखें र अनुभव गरें
मेरो खुसी । १९ पुष, २०७७ आईतवार ०९:५४ मा प्रकाशित
खजुरा–३ कि १९ वर्षीया मीना सुनार भन्छिन्, ‘मलाई पढ्ने रहर थियो । घरको आर्थिक अवस्थाले पढाउन नसक्ने भएपछि विवाह गर्नुपर्ने बाध्यता भयो ।’ खजुरा–६ ओली टोलका तिलप्रसाद ओलीले समाजमा भइरहेको अभ्यासको ब्याख्या गरे, ‘बालविवाह गर्नु हुँदैन भनेर सबैलाई जानकारी छ तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण उनीहरुसँग अरु कुनै विकल्प छ र ?’ ‘बालविवाह गर्ने रहर होइन । हामीलाई पनि थाहा छ । सानै उमेरमा विवाह गर्दा दुःख पाइन्छ भनेर तर पनि हाम्रो बध्यता हो’, बाँकेको खजुरा गाउँपालिका–३ नरैनापुरका रहिम शेखले तर्क गरे ।
प्लान इन्टरनेशनल नेपालले गरेको मिड लाइन सर्भेमा अनुसन्धानकर्ताको रुपमा मैले भेटेका यी प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । स्याकले बाँकेका ८ वटै स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गरेको बालविवाह रोकथाम परियोजनापछि जिल्लामा बालविवाहको अवस्था पत्ता लगाउन अनुसन्धान थालिएको हो । जिल्लाका कति वडा अहिले बालविवाह मुक्त घोषणाको तयारीमा छन् । खजुरा गाउँपालिकाको सम्पूर्ण वडामा पुगेर मैले स्थानीयसँग अन्तरक्रिया गर्ने मौका पाएकी थिए । मेरो अनुभवले बालविवाह अझैं पनि एक असमान्य समस्याको रुपमा पाएँ । जस्ले वर्षौंदेखि हाम्रो समाजमा जरा गाडेर बसेको छ । खजुरामा बालविवाह अझैं पनि एक जल्दोबल्दो समस्याको रुपमा रहेको मैले देखें र अनुभव गरें । यो समस्यालाई निर्मूल पार्न किशोरी क्लब, बाल क्लब, स्थानीय तह, सामाजिक संघसंस्थाहरुले जनचेतना जगाउने विभिन्न कार्यक्रम गरेर पहल गरेका छन् । त्यो पहलका कारण बालविवाहको समस्याहरु बाहिर आइरहेका छन् । जुन सुधारको सकारात्मक पक्ष हो किनभने पहिले बालविवाहलाई समस्या होइन भन्ने मान्यता थियो । यो परम्परा र विवाह संस्कारको रुपमा मात्र लिइन्थ्यो । अहिले मनिसहरुले यो गलत हो भन्ने बुझेका छन् तर अचम्म लाग्ने कुरा, यति पहल हुँदाहुँदै पनि र जानकारी हुँदाहुँदै पनि बालविवाह रोकिएको छैन ।
बालविवाहको मुख्य कारणमा जनचेतनाको कमी र अज्ञानता आउँछ तर सर्भेको क्रममा मैले भेटेका मानिसहरुको कुरा सुन्दा पढे लेखेका र चेतना भएका मनिसहरुबाटै बालविवाह गर्ने र गराउने काम भइरहेको छ । अज्ञानाता भन्दा पनि अगाडि गरिबी अर्को मुख्य कारण रहेछ भन्ने मलाई महसुस भयो । बालविवाहलाई जरैबाट उखेलेर फल्नका लागि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका अभिभावकलाई आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर हुन जिवनोपयोगी सीपमूलक तालिम दिएर रोजगारीका लागि सहयोग गर्नुपर्ने खाँचो छ । आयआर्जनबाट घर, परिवार र समाजलाई समृद्धिको बाटोमा डो¥याउँछ । विपन्न परिवार आत्मनिर्भर हुन्छ । बालविवाह न्यूनिकरण गर्दै अन्त्य गर्न स्थानीय तहले लक्षित वर्गको उत्थानका लागि ध्यान दिने कि ?
1 thought on “किन रोकिएको छैन बालविवाह ?”
Bibash Acharya says:
Ma tapai ko Kura sanga ekdamai sahamat Xu Chetena G. BAL bibaha ko aantya Ka lagi sarba pratham Garibi ma raheka Bippanna pariyar haru lai tes BATA unmukh garaunu nai pahilo RW pravavKari upaye huna sakne Kura maile Pani hjr ko Yo lekh padhera Mahasus Gareko Xu. Ani Yo article lai Jo kohile padhna ani bujhna sakne Vasa sailee ma lekhnu vayeko ma hjr lai Pani Dhanyabaad?